वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि ढुंगा, गिट्टि, बालुवा उत्खनन गर्ने गण्डकी सरकारको नीति ! - Samadhan News
वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि ढुंगा, गिट्टि, बालुवा उत्खनन गर्ने गण्डकी सरकारको नीति !
समाधान संवाददाता २०७८ जेठ ३१ गते १६:४७
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरि ढुंगाा, गिट्टि र बालुवा उत्खनन, उपयोग र व्यवस्थापनका लागि वातावरण मैत्री बनाउन आवश्यक समन्वय गरिने जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमारी पौडेलले नीति कार्यक्रम सुनाउँदै यस्तो कार्यक्रम रहेको सुनाएकी छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नारायणी नदीमा बिच पार्क बनाउने भएको छ । प्रदेशका धार्मिक सम्पदाहरु जोड्न धार्मिक पथ बनाइने प्रदेश प्रमुख पौडेलले बताइन् । भद्रपुर, सीमरा, जनकपुर, जुम्ला र धनगढीमा सिधा हवाई सेवा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
धौलागिरि संरक्षण क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने प्रदेश प्रमुख पौडेलले बताइन् । बिदा पर्यटन कार्यक्रले निरन्तरता पाउने भएको छ । नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा एकएक वनपैदावर आधारित उद्योग निर्माण गरिने कार्यक्रम छ ।